Xubno ka socda Baarlamaanka Soomaaliya oo kulan la qaatay Jaaliyadda Cape Town+Sawirro – Radio Muqdisho
Kulankaan oo ahaa mid casha sharaf loo sameeyay xildhibaan Abdi Axmad Dhuxulow Dhegdheer oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee dowlada fedaraalka Soomaalia iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa waxaa uu ka dhacay Hotel Cape Tonia ee kuyaalla bartamaha magaalada cape town
Kulanka ayaa waxaa qeyb ka galay Mas’uulka safaarada Soomaaliyeed ee magaalada cape town abdullaahi Cali Xasan kaasoo daadihinayay su,aalo weydiin dhexmartay xildhibaanka iyo ka soo qeyb galayaashii kulanka.
Xaaji Ibrahim Xuseen oo ku hadlay afka odayaasha Soomaaliyeed ayaa xildhibaanka uga warbixiyay xaalada ay ku sugan yihiin Soomaalida ku nool gobalkaan iyo guud wadanka koofur afrika.
Sidoo kale, Mahad Cumar Abdi Mahad Libaax oo jaaliyadda u hadlay ayaa ku faanay in soomaalida gobalkaani ka mideysan yihiin soo dhoweynta martida soomaaliyeed iyagoon u fiirineyn qabiil iyo gobal toona.
Ugu danbeyntiin xildhibaanka ayaa si kooban warbixin uga siiyay jaaliyadda xaalada Soomaaliya iyo howlaha Dowlada Fedaraalka ee iminka socda.
Xildhibaan Abdi Ahmed Dhuxulow dhegdheer ayaa noqonaya mas’uulkii ugu horeeyay ee ka socda aqalka sare ee soo gaara magaalada cape town dalka Koonfur Africa.
Xisbiga ANC ee K/Afrika oo dooranaya hoggaan cusub